Real Madrid Oo Gareth Bale Ku Helaysa Christian Eriksen Iyo £34 Milyan – Latest Sports News
Real Madrid Oo Gareth Bale Ku Helaysa Christian Eriksen Iyo £34 Milyan
Kooxda kubadda cagta Real Madrid ayaan niyadsamaan ku qabin laacibka reer Wales ee Gareth Bale, waxaana la filayaa in xagaaga soo socda ay u ogolaadaan inuu ka baxo kooxda, iyaga oo dhegaysanaya dalabyada suurtogalka ah ee ay kooxuhu kaasoo gudbinayaan.
Bale oo kursiga kaydka ku qaadanayey inta badan kulamadii xili ciyaareedkan ee kooxdiisa, ayaa waxa la sheegay in naadiyo badan oo Ingiriis ah ay raadinayaan, waxaana horeba dalabyo dhawr ah uga gudbisay Manchester United, halka Tottenham ay hadda keentay dalabkii ugu macquulsanaa ee Real Madrid ay u riyaaqday.
Sida uu qoray wargeyska Don Balon ee kasoo baxa waddanka Spain ayaa hadda og in aanay kooxdiisu hadda wax niyad ah u haynin, waxaana uu ka war-qabaa in naadigiisii hore ee Tottenham ay tahay kooxda miiska soo saartay dalab uu qayb ka yahay Christian Eriksen oo ay Los Blancos xiisaynaysay.
Wargeysku wuxuu sheegay in kooxda ka dhisan woqooyiga London ee Tottenham ay doonayso inay dib usoo ceshato laacibkeeda hore ee ay Real Madrid ka iibisay sannadkii 2013, isla markaana ay ka baaraan-degtay heshiis aanay Real Madrid diidi karin oo ay xagaaga hor-dhigi doonto.
Real Madrid ayaa la wariyey inay ku doonayso laacibkan ugu yaraan inay ku iibiso £103 milyan oo u dhiganta €120 Milyan oo Euro, sidaas darteedna waxay Tottenham usoo bandhigaysaa Real Madrid, Christian Eriksen iyo lacag dhan £34 milyan oo u dhiganta €40 milyan, si ay ugu suurtogasho inay dib usoo ceshato.
Eriksen oo ka mid ah ciyaaryahannada khadka dhexe ee waqtigan caalamka ugu muhiimsan ayaa lala xidhiidhiyey Real Madrid xagaagii tegay, hase yeeshee wax dhaqdhaqaaq ah kamay samaynin.